Mayelana NATHI - I-Monkking Factory
Ubhaka Wansuku zonke
Amahlombe / Isikhwama Sesithunywa
Isikhwama semikhono esikhwama esifushane / sekhompyutha ephathekayo
I-Drawstring / Isikhwama seGym
ekhaya / Mayelana NATHI
Ifektri yaseMonkking ihlanganisa indawo engaba ngamahektare angama-35, nendawo yaseshabhu ethatha cishe amamitha-skwele angama-30,000.
Sasigxile ezikhwameni zokuklama nokukhiqiza ngeMonkking brand ne-OEM brand isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-27years. Imboni yethu yasungulwa ngo-1993, idolobha elisogwini eFujian, eChina, elijabulela idumela elithi "Idolobha Lezikhwama Namacala". Indlunkulu yethu etholakala eXiamen City nefektri etholakala eQuanzhou City. IMonkking yayihlose ukuhlanganisa kanye nokulwela ukusungula izinto ezintsha, ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo nemikhiqizo ehamba phambili.
Umhlinzeki Wakho Onokwethenjelwa, Inketho Yakho Engcono Kakhulu!
Sizibophezele ekuhlinzekeni insizakalo yobuchwepheshe kanye nokukhiqiza okusha kakhulu kuwo wonke amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Ngasikhathi sinye, silwela ukusiza abasebenzi bethu ukuthi benze indawo enempilo, ephephile, enethezekile futhi enobuciko bendawo yomsebenzi womphakathi.Sifuna abantu bethu bakuthande abakwenzayo nsuku zonke, futhi bathuthukise abantu abanomthelela omuhle ezimpilweni zabo nasemsebenzini wabo. Sifuna futhi ukusebenzisana nabalingani bomhlaba wonke ukutadisha nokucwaninga ama-Projects amasha, ukuthola isisombululo nokuhlangabezana nazo zonke izinselelo ezintsha.
UKWENZA IBHIZINISI NATHI
Ithimba leMonkking R & D lilwela ukusungula nokuthuthukisa ukwakhiwa kwemikhiqizo engama-35new ngenyanga ukuhlangabezana nezidingo zokuthengiswa kwamakhasimende.
Izitezi zethu ze-workshop zinabasebenzi abangaphezu kuka-200 abanamakhono, imigqa engu-8 yokukhiqiza, amasethi angama-200 emishini yokuthunga ngekhompyutha. Ngamandla- 100,000pcs ojosaka abayindida noma 200,000pcs ojosaka abalula ngenyanga.
Inhloso yethu ukufeza isu lokuwina: ukusiza abalingani bethu ukuthi bathole imiphumela yebhizinisi enenzuzo, ngasikhathi sinye siqinisekisa impilo ezinzile yabasebenzi kanye nemvelo yomphakathi esimeme.
Ifektri yaseMonkking inokuhlangenwe nakho okungama-27years emkhakheni wezikhwama, manje sesinguchwepheshe kakhulu ekuklameni, ekuthuthukiseni nasekwenzeni isikhwama sezinhlobo ezahlukahlukene.
Ukwenza ibhizinisi nathi, kungukukhetha kwakho okulungile!
Umkhiqizo wethu we "MONKKING", Obhaliswe emazweni angama-22 aphesheya kwezilwandle, futhi sakha amahhovisi wokumaketha eMoscow, eRussia naseXiamen, eChina, athokozela ukuthandwa komhlaba wonke.
Ngokuhlangenwe nakho okungaphezu kwama-27years, sakha futhi sakha izinhlobo zezikhwama, ezinjenge-Backpack, i-Outdoor Bag, i-Duffel Bag, i-Shoulder / Messenger Bag, i-Briefcase / i-Laptop Sleeve, nabanye. Lapho izinto zokusetshenziswa zifika Warehouse, nangaphambi kokuqala kokukhiqizwa, i-IQC yethu izokwenza ukuhlolwa kwendwangu futhi ihlole ilogo yokuphrinta yesilikisi kanye nelogo efekethisiwe, njll. Ngesikhathi sokuthunga, umholi womugqa wokukhiqiza uzokwenza ukuhlola okuyingxenye. Ngemuva kokuthunga, i-QC izokwenza ukuhlolwa kwekhwalithi yesikhwama ngasinye futhi iqiniseke ukuthi zonke izikhwama zilungile ngaphambi kokupakisha. Inkampani yethu iyaqhubeka nokwenza imikhiqizo futhi inwebe amandla wokukhiqiza, manje, sisungule ukubambisana kwamasu nemikhiqizo eminingi emkhakheni wokwenza ngokwezifiso we-ODM.
UKUTHENGISA UKUTHENGISA IQEMBU NAMAKHASIMENDE
Isevisi yethu akuyona kuphela ukuqashelwa kwamakhasimende, kodwa futhi nokuphishekela impumelelo yamakhasimende. Sihlala sinamathela kwisisekelo se- "Good Faith, Quality, Scientific Management", futhi siphikelela ku- "Quality First". Zibophezele ekubeni ibhizinisi eliholayo embonini, ukukhulisa umkhiqizo oqinile wasekhaya nowomhlaba jikelele.
Sizoba ngumhlinzeki wakho wesikhwama ongcono kakhulu futhi othembekile eChina.
Ingabe kufanelekile ukuthenga izikhwama zokuhlanza i-UV?
Kungani izinto ze-RPET zithandwa?
0086-18205925267 0086- (0) 592-3665530 sales@hsbags.com Indawo Yezimboni yaseChengnan, Huian, Quanzhou, Fujian